Shiinaha Darajada Qurxinta GSH l-Glutathione / lglutathione Powder Dhimista warshada iyo soosaarayaasha | Guanlang
Fasalka qurxinta GSH l-Glutathione / lglutathione Powder Waxaa loo yareeyay maqaarka caddeeya budada glutathione
Magaca Badeecada: L-glutathione Waa Yaraaday
Magacyada kale: l-glutathione
EINECS Lambar: 2,00000725-4
Glutathione (GSH) waxaa lagu magacaabaa Dhimis glutathioneama L-GlutathioneReduced, antioxidant muhiim u ah dhirta, xayawaanka, fungi, iyo bakteeriyada qaar iyo archaea, oo ah budada cad ee cad. Waa atripeptide iskuxidhka gamma peptide ee udhaxeeya kooxda carboxyl ee silsiladda kooxda glutamate iyo kooxda amine ee cysteine, kooxda carboxyl ee cysteine ​​waxay kuxirantahay isku xidhka peptide-ka caadiga ah ee glycine. kudhowaad 5 mM unugyada xayawaanka. Glutathione waxay yareyneysaa isku xirnaanta disulfide ee lagu sameeyay gudaha cytoplasmicproteins ilaa cysteines iyadoo loo adeegaayo deeq bixiye elektaroonig ah. In geeddi-socodka,glutathione waxaa loo beddelaa qaabkeeda oksidheeyaha, glutathione disulfide (GSSG), sidoo kale loo yaqaan L-glutathione.
Salfateeti Pp 300ppm
Biraha culus Pp10ppm
Loss qallajinta (3h at 105 105) ≤0.5%
Hadhaaga Kicinta ≤0.1%
L-glutathione qayilay ≤1.5%
Wasakhda oo dhan ≤2.0%
Assay (aasaas qalalan) 98.0% ilaa 101.0%
1.Barraha ilaali oo daawee cudurada beerka la xiriira.
2. Daawee burooyinka oo yaree waxyeelada kimikalka iyo shucaaca.
3.Glutathione sida dawada ka hortagga, waxay ku milmi kartaa iskudhafyada sunta ah, ions bir culus ama walxaha kansarka si kor loogu qaado saxaradooda. Waxaa loo isticmaali karaa daaweynta sunta sunta ee acrylonitrile, fluoride, carbon monoxide, biraha culus iyo dareeraha kale ee organic.
4.Ka dawee cudurrada indhaha, gaar ahaan indho-beelka.
5.Glutathione waxay xakamayn kartaa isku dheelitir la'aanta acetylcholine iyo cholinesterase. Waxay ka ciyaartaa kahortagga xasaasiyadda.
6. Daraasadihii ugu dambeeyay waxay muujiyeen in glutathione ay sidoo kale saameyn ku yeelan karto xakameynta fayraska AIDS-ka.
Cuntada iyo codsiyada:
1.Glutathione oo u dhiganta fiitamiin C, ayaa lagu dari karaa caano fadhi iyo cunugga waxayna ka ciyaari kartaa door xasilin ah;
2. Maaddaama glutathione ay ka hortagi karto midabaynta, waxaa lagu dari karaa miraha qasacadaysan si looga hortago Kareynta;
3.Waxaa yaraaday Glutathione, waxaa lagu dari karaa badeecooyinka burka si ay u ciyaaraan kaalin dhimis iyo xoojinta amino acid;
4.Ku darista Glutathione rootiga waxay soo gaabin kartaa waqtiga isku darka ee habka wax soo saarka
5.Glutathione waxay leedahay dhadhan adag oo hilib ah marka lagu qaso L-glutamate, walxaha dhadhanka nucleic acid ama isku darka.
Glutathione waxay xakameyn kartaa nucleic acid waxayna xoojin kartaa dhadhanka keegga kalluunka.
6.Glutathione waxay kobcin kartaa dhadhanka hilibka, jiiska iyo waxyaabaha kale ee cuntada.
Noocyada kaladuwan ee cuntada shaqeynaya iyo cuntada caafimaadka waxaa lagu diyaariyaa glutathione oo ah cunsur firfircoon oo shaqeyneysa.
Qurxinta iyo codsiyada:
1.Glutathione way nadiifin kartaa walxaha cytotoxic. Isticmaalka alaabada daryeelka maqaarka waxay daaweyn kartaa oo yareyn kartaa biraha culus ee maqaarka ku jira iyo sunta ku jirta boodhka.
2.Glutathione waa antioxidant ka hortagga gabowga. Waxay ka saari kartaa xagjirnimada bilaashka ah ee jirka waxayna ilaalin kartaa dhaqdhaqaaqa nafleyda ee borotiinka iyo enzymes. Waa qashin qubka xagjirka ah ee xagjirka ah ee jirka kujira, si falcelinta xagjirnimada xorta ah ay usii socoto.
3.Glutathione waxay leedahay saameyn aad u wanaagsan oo caddeeya iyada oo nuugista transdermal. Waxay joojisaa soosaarka xagjirnimada bilaashka ah iyo
peroxides ka soo baxa melanin si loo yareeyo nashaadaadka kiimikada ee melanocytes iyo in laga takhaluso walxaha sunta ah ee ka soo baxa unugyada midabka.
Waxay aakhirka ka ilaalisaa unugyada midabka midab necrosis iyo metamorphism.
Hore: Alaabooyinka Kala-baxa ah ee Shiinaha Mashiinka Miisaanka Tayada Sare ee 99% Orlistat CAS 96829-58-2
L-glutathione Waa la dhimay
Daawashada Alaabada Shiinaha Miisaanka Tayada Sare ee Los ...